Echela ka ohere dapụta gị. Mepụta ya. - Amaghi - Quedia Pedia
Echela ka ohere dapụta gị. Mepụta ya. - Amaghi
Anyị na-eche oge kwesịrị ekwesị. Ma, odighi ihe dika oge kwesiri. Ọ bụrụ n’ịchọrọ imezu ihe, ị ga-emerịrị ya ugbu a. Ọ bụrụ na ịmaliteghị ugbu a, enwere ike na ị nweghị ike ịme ihe ịchọrọ.
Ọ dị mma, ihe kachasị mma ị pụrụ ime bụ ibido inye mbọ maka ihe mgbaru ọsọ a. Bebụ eziokwu, ọ bụ naanị ụzọ ga - eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma. Ọfọn, enwere ọtụtụ ohere anyị ga - ejide. Mana, imirikiti oge anyị anaghị eche gbasara ya.
Yabụ, iji zere ọnọdụ dị ka nke ahụ, ihe ị ga - eme bụ ịmepụta ohere gị. Maka nke ahụ, ị ​​ga-arụ ọrụ ike. Mustkwesịrị ịmara na ịmepụta ohere gị abụghị ihe dị mfe. Maka nke ahụ, ị ​​ga-agbado mbọ.
Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịdị gị ka ị daa mbà. Mana nke ahụ bụ ihe kachasị emerụ ahụ ị ga - eme. Ọ gaghị eme ka obi sie gị ike kama, ọ ga-emekwa ka o siere gị ike iru ebe ịchọrọ. Ya mere, kwusi ichere maka ohere ma mepụta nke gị.
Quates Motesational Business Quotes
Ozo Oru Oma Nke Oma
Ulo oru ego
Quates na-akpali akpali maka ọrụ
Ohere ndi mmadu choro
Ohere Quetition Quot
Ohere Kwuru Onyinyo
Ozo nke ubochi
Quotres Banyere Ohere na Ohere
Nkwupụta edemede mkpirisi
Ekwekwala ka ihe ọ bụla ghara ịkpa ego ị na-echefu. - Amaghi
Ekwekwala ka ihe ọ bụla ghara ịkpa ego ị na-echefu. Ọ dị mkpa na…
Ozi dị n’otú mmadụ si emeso gị. Naanị gee ntị. - Amaghi
Mgbe mmadụ mesoro gị, ị na - enwekarị ozi zoro ezo n’ime nke ahụ! Ọ dị mkpa ịghọta…
Ka anyị na-etolite, anyị na-achọpụta na ọ baghị uru inwe ọtụtụ ndị enyi, yana mkpa karịa inwe ezigbo ndị. - Amaghi
Site na nwata, anyi na elekwasiri anya mgbe nile ni inwe onu ogugu ndi enyi anyi nwere…
Echefula onye nyeere gị aka mgbe onye ọ bụla na-achọ ngọpụ. - Amaghi
Na ndụ, anyị na-ahụ ma ihe ọma ma oge ọjọọ. Ndụ enwetaala ma…
Ihe ụfọdụ chọrọ obere oge na oghere iji pụta n’ihe ha ga-abụrụ gị. Arụgide ya. Ka ọ gbaa. - Amaghi
N'oge ụfọdụ, anyị anaghị enwe ndidi n'ihi ihe ndị anyị na-anwa ịchụ n'elu mkpebi…